अनु मलिक इण्डियन आइडलको निर्णायकबाट आउट ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
अनु मलिक इण्डियन आइडलको निर्णायकबाट आउट !
एजेन्सी । ‘तु मुम्बई आ रहा है । तु मुम्बई आ रहा है ।’ सोनी टेलिभिजनको चर्चित इण्डियन आइडल शोका निर्णायक अनु मलिकको यो लाइन अब तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्न । अनु मलिक अब इन्डियन आइडलको निर्णायकका रुपमा देखिने छैनन् । मि टू अभियानका क्रममा गायिका सोना महापात्रा र श्वेता पण्डितले अनु मलिकमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लगाएका थिए ।
यौन उत्पीडनको आरोप लागेपछि सोनी टेलिभिजनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनु मलिकलाई इन्डियन आइडलको निर्णायक मण्डलबाट हटाएको हो ।
सोनी टिभीले भनेको छ, ‘अनु मलिक अब इन्डियन आइडलको जूरी प्यानलमा छैनन् । शो पहिलेजस्तै नै चलिरहन्छ । हामी शोमा भारतीय संगीत क्षेत्रका कैयौँ ठूला नामलाई पाहुनाका रुपमा बोलाउनेछौँ । उनीहरुले विशाल र नेहासँग मिलेर इन्डियन आइडल–१० का प्रतिभाशाली प्रतियोगीहरु छान्ने छन् ।’
तर समाचार एजेन्सी पीटीआईसँग अनु मलिकले भनेका छन्, ‘मैले इन्डियन आइडलबाट ब्रेक लिने निर्णय गरेको छु । किनकि मैले आफ्नो काममा समय दिनै भ्याएको थिइनँ । च्यानल मेरो निर्णयसँग सहमत छ ।’ अनु मलिक सन् २००४ देखि इन्डियन आइडलसँग जोडिएका थिए ।
केही दिनअघि गायिका श्वेता पण्डितले अनु मलिकले आफूमाथि यौन उत्पीडन गरेको बताउँदै ट्विटरमा लेखेकी थिइन्, ‘सन् २००० मा ‘मोहब्बते’ फिल्मसँगै मेरो करियरको शुरुवात भयो । म आफ्नो सफलतालाई कायमै राख्न राम्रो नयाँ गीतको खोजीमा थिएँ ।
त्यसैबेला मलाई अनु मलिकको म्यानेजरको फोन आयो । सन् २००१ मा मलाई अंधेरीको एम्पायर स्टुडियोमा बोलाइयो । म एकदमै उत्साहित थिएँ । एउटा क्याबिनमा म र अनु मलिक थियौँ । बिना संगीत उनले मलाई गीत गाउन भने ।
गीत सुनेपछि अनुले भने – म तिमीलाई शान र सुनिधिसँग एउटा गीत गाउने मौका दिनेछु तर त्यसभन्दा पहिले तिमीले मलाई किस गर । यो भन्दै गर्दा अनु मुस्कुराइरहेका थिए । मेरो सम्झनामा त्यो एकदमै खराब मुस्कान थियो । त्यतिबेला म केवल १५ वर्षकी थिएँ । विद्यालय जान्थेँ । म कल्पनै गर्न सक्दिनँ कि त्यो कस्तो पल थियो ?’
एजेन्सी । अभिनेत्रि कंगना रनोट भारतकी सबैभन्दा महंगी कलाकार बनेकी छन् । उनले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा […]
सलमान खान टेलिभिजन खोल्दै, द कपिल शर्मा शो र विग वोस प्रशारणको तयारी
भारत । बलिउड सुपरस्टार सलमान खानले नीजि टेलिभिजन च्यानल सञ्चालन गर्ने भएका छन् । बलिउडमा एकछत्र राज गर्दै […]
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपुरले नेपाली युवक रोहन श्रेष्ठसँग लगनगाँठो कस्ने निश्चित गरेकी छन् । […]
ट्रेन्डिङमा टिकटकबाट भाइरल जुम्ल्याहा दिदीबहिनीको पहिलो म्युजिक भिडियो
काठमाडौं । टिकटकबाट भाइरल भएका जुम्ल्याहा दिदीबहिनी प्रिन्सी खतिवडा र प्रिज्मा खतिवडाको अभिनय रहेको पहिलो […]
चलचित्र‘जात्रै जात्रा’ को पहिलो गीत ‘माया पिरीम’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
काठमाडौं । चलचित्र जात्रै जात्रा’को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको हो । निर्माण युनिटले राजधानीमा एक कार्यक्रम […]
बिराट कोहलीको कुकुरसँगको सेल्फी : फ्यानहरु सबै चकित
काठमाडौं । भारतीय क्रिकेटर तथा भारतीय टिमका कप्तान बिराट कोहली समयसमयमा चर्चामा आउँने गरेका छन् । उनी खेलको […]